Uhlelo iThe Kings Suite lukushiya nolwazi
USPHE noNaves abashayela uhlelo iThe Kings Suite banendlela yokuxhumana nabalaleli ikakhulukazi esigabeni sabo esibizwa ngeWhen I get home
BONISWA MOHALE | October 22, 2019
UMA sekuntambama asidingi ukuzwa izindaba ezisihluthula umoya, sidinga ukulalela abasakazi abashukumisa inkundla kodwa besinika izindaba ezinomsoco. Yilokho engikuzwayo njalo uma ngilalela uhlelo iThe Kings Suite olushayelwa nguSiphesihle “DJ Sphectacula” Ngwenya noLebogang “DJ Naves” Naves ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu ngo-3 kuya ku-6 ntambama kwiMetro FM.
Kuzokhumbuleka ukuthi ngesikhathi kwenziwa izinguquko emsakazweni laba basakazi bashiye isiteshi saKwaZulu-Natal babuyela ekhaya labo okuyiMetro FM.
IThe Kings Suite inoSphe noNaves okuyibona abashayela uhlelo bese kuba khona uRelebogile Mabotja ofunda izindaba no-Angie Khumalo owenza ezemidlalo.
Okuhle ngalo wukuthi alugxilile emculweni wokujuxuza kuphela kodwa kukhulunywa ngezingxoxo ezinomsoco kwazise kunosuku okukhulunywa kulo ngezempilo, ezomnotho, ezamabhizinisi nezobuchwepheshe.
Isigaba sohlelo esingichaza kakhulu yileso esibizwa ngeWhen I get home ngoba senza lolu hlelo luxhumane kakhulu nabalaleli kwazise bathumela imiyalezo eqoshiwe basho ukuthi bazokwenzani uma befika emakhaya.
Ngesikhathi luqala ngangiphatheka kabi ngoba abalaleli abaningi ikakhulukazi abesifazane babevele bathi uma befika ezindlini zabo bazokwala izithandwa zabo.
Bekungiphatha kabi lokhu kodwa muva nje ngihleka ngedwa uma ngilalele kwazise abanye basuke bejahe ukukhumula obhodisi ababaklinyayo uma befika ekhaya.
Njengomuntu wesifazane ngiyalwazi usizi lukabhodisi ikakhulukazi uma kade lishisa, kushaya * -6 ntambama ungasawufuni usufisa ukuzikhululekela.
Abanye basuke bejahe ukugeza bashaye izindawo, abanye basuke befuna ukugeza bese behlisa ngesiphuzo esibandayo, iwayini nokunye okubathokozisayo.
Kuyangijabulisa nokuzwa amadoda ethi azokhipha amakhosikazi awo noma izintombi zawo.
Lolu hlelo lwenza ubone ukuthi noma ngabe sinezingqinamba ezingakanani eNingizimu Afrika kodwa kuningi okuhle okwenzekayo.
Zikhona nezinye izigaba ezinomsoco, isibonelo nje ngoLwesibili kusuke kukhulunywa ngezindaba ezithinta imali.
Ngijabulile ngizwa uSphe noNaves bekhuluma ngendaba yestokofela sikaWhatsApp okukhuzwe abaningi ngaso.
Akuvamisile ukuthi iziteshi zomsakazo zikhulume ngamabhanoyi ngoba zizitshela ukuthi abantu banolwazi olugcwele ngawo.
Empeleni uNaves uthe akayena ungoti wemali kodwa akakuboni kuwumqondo ophusile ukutshala imali yakho oyisebenze kanzima entweni ekuthembisa inzalo emangalisayo.
Baze bathinta iNational Stokvel Association of South Africa ukuze baxwayise abantu.
Kubuye kube nesigaba esibizwa ngePhanda Phusha lapho osomabhizinisi abancane bethola ithuba lokuzikhangisa bachaze ngamabhizinisi abo nemikhiqizo abayidayisayo.
Siyazi sonke ukuthi noma sesibadala bakhona kithina abathanda ukudlala imidlalo ngakho sikhona nesigaba esikhuluma ngemidlalo emisha esuke isanda kukhishwa, kuhlonyiswa abathanda le midlalo ngolwazi oluzobasiza ukungenela imincintiswano ehlukene.